Nin u dhashay Shiinaha oo laga baadhay cudurka dilaaga ah ee qarsoon iyadoo laga cabsi qabo inuu ku faafo dunida oo dhan – Bandhiga
Nin u dhashay Shiinaha oo laga baadhay cudurka dilaaga ah ee qarsoon iyadoo laga cabsi qabo inuu ku faafo dunida oo dhan
Feeras-ka cusub oo ka dilaacay gudaha dalka Shiinaha ayaa laga cabsi qabaa in uu gaaro gudaha dalkaasi Australia, kadib markii la arkay nin kasoo jeeda Brisbane, oo lagu arkay astaamaha Feeraskaasi.
Ninkaan lagu arkay astaamaha Feyruskaan ayaa waxa uu kasoo laabtay fasax uu ku aaday gobolka Wuhun, ee dalka Shiinaha
Ra’iisel wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay digniin ah in la joojiyo safar-ka lagu aadayo gobolka Wuhun, iyado soo jeediyay in laga fogaado dadka kasoo jeeda gobolkaas.
Hada, waxaa lagu soo waramayaa in uu joogo guriga, si uu u maqlo hadii uu ku dhacay cudurka oo horey ugu dhintey afar qof.
Ninkaan waxa uu booqday qoys ku sugnaa gobolka Wuhan ee dalkaasi Shiinaha, kaasoo xuddun u ah cudurka dillaaca.
Mr Morrison wuxuu sheegay in dowladdu ay sare u qaadi doonto heerka talo bixinta safarka ee magaalada Wuhan illaa heerka 2 – taas oo macnaheedu yahay in socdaalayaasha “ay muujiyaan taxadar aad u sarreysa”.
Afhayeen u hadlay qaybta Caafimaadka ee Magaalada Queensland ayaa sheegay in ninkaasi uu dhawaan ka soo noqday Bartamaha Shiinaha isagoo qaba xanuun dhanka neefsashada ah.
“Maadaama ninku uu u safray Wuhan, Coronavirus waa mid ka mid shuruudaha lagu tijaabinayo,” ayuu yidhi. “Ninkani waxa uu ku nagaan doonaa go’doon ilaa iyo laga xalliyo astaamaha lagu arkay ninkani.
“Waxaan ka codsaneynaa qof kasta oo ku soo kordha astaamaha neef-mareenka 14 maalmood gudahood safarka uu ku tagayo Wuhan inuu si dhakhso leh ula kulmaa dhaqaatiirta guud ee caafimaadka.
Waaxda caafimaadka ee gobolka, ayaa lagu soo waramayaa in ay rajeynayaan baaritaanka in natiijooyinkiisa lagu helo dhowr maalmood gudahood, sida ay baahisay Courier-Mail.
Mas’uuliyiinta caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in 139 kiis oo cusub oo ah caabuqa aan la garaneynin waxa uu yahay laga helay dad kaloo horleh.
Khubara caafimaad ayaa sheegay in tirada laga yaabo in intaas ay ka badan tahay, maadaama xannunka markii ugu horeysay la arkay dhamaadka sanadkii hore.
Sarkaal sare oo qaybta caafimaadka ee magaalada ayaa sheegay in seddex ruux oo ka yimid Wuhu ee hadda ay kusii jeedaan Sydney, waxaa la rajeynayaa in ay la kulmi doonaan saraakiishka amniga xuduudaha, xasilooni darrada iyo shaqaalaha caafimaadka ee NSW iyada oo laga jawaabayo “xaaladdaha deg degga ah.
Muuqaal si weyn loogu wadaagayay barta Twitterka ayaa muujinaya dadka ku sugan duulimaad gudaha ah oo ka baxaya magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha iyaga oo heerkulkoodu uu qaatay hal-qof-qof oo ku habboon difaaca.
Qaar badan oo ka mid ah kiisaska bilowga ah ee coronavirus-ka ayaa lala xiriiriyay suuq lagu iibiyo kalluunka oo ku yaal gobolka Wuhan.
Qaar kamid ah kiisaska Feeraskan ayaa lasheegay In lagu arkay dalalka dariska la’ah Shiinaha sida Japan, South Korea, Thailand iyo Hong Kong oo laga helay labo ruux oo qaba Feeraskan.
Dalxiise British ah, oo la yiraah Ash Shorley, ayaa isagana loola cararay cisbitaalka, ka gadaal markii looga shakiyay in uu qabo feyruskaan, waxa lagu soo waramayaa in dalxiisahani uu ku sugnaa jasiiradda Koh Phi Phi ee dalka Thailand.
Faafida feyruskaan ayaa sababtay qaylo-dhaan, sababta oo ah waxay la xiriirtaa Dhibaatooyinka Weynaa ee Xanuunka SARS, kaasoo dilay ku dhawaad ​​650 qof guud ahaan Shiinaha iyo Hong Kong sanadihii 2002-2003.
Feyruskaan aya waxa ay sababaan cuduro u dhexeeya hargabka caadiga ah iyo kuwa aadka u daran sida SARS.
Dawladda Shiinaha ayaa markii hore isku dayday in ay qariso halista cudurkaas laakiin waxa daboolka ka qaaday dhakhaatiir heer sare ah.
Calaamadaha hore ee feryruskaan cusub waxaa ka mid ah qandho, qufac, xabadka oo adkaada iyo neefsashada oo gaaban, iyo kuwa si daran u xanuuna oofwareenada.
Ugu yaraan dhowr wadamo oo dhaca Qaarada Aasiya iyo saddax garoon diyaaradeed oo Mareykan ah ayaa bilaabay inay baaraan dadka rakaabka ah ee ka imaan doona bartamaha Shiinaha.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay inay aad muhiim u tahay in la qaado tallaabo kasta oo suuragal ah si loola dagaallamo cudurka ku dhacay ugu yaraan 217 qof oo ku nool waddanka.
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa maanta la filayaa in ay kulan ku yeeshaan magaalada Geneva, si ay ugu munaaqashoodaan waxa cudurka sababay, iyo hadii uu yahay mid xaalad degdeg ah.
Baarayaasha waxa ay u maleeynayaan in cudurka uu ka bilowday xayawaanku una gudbay aadanaha, laakiin waxaa kaloo soo kordhayay kiisas la xariira isu gudbinta qof-ka iyo qofka kale.